Amboary ny sainao hitsiky - Church of World Switzerland of Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2017-04 mpandimby ny Magazine > Manapaha hevitra hitsiky
Taorian'ny nanaovako ny fantsom-baovao Krismasy sasany tany Costco [mitovy amin'i Manor], dia nitsiky aho tamin'ny vehivavy antitra iray izay niditra vao niditra tao amin'ny parking. Nijery ahy ilay ramatoa ary nanontany hoe: "Tsara kokoa noho ny olona any ivelany ve ny olona ao anatiny?" Hmmm, hoy aho. "Tsy azoko antoka" hoy aho "nefa nanantena aho fa izy io!" Ny volana Desambra dia volana maharikoriko. Manomana Mety ho sarotra ho antsika ny krismasy ary mety hanaratsy ny toe-tsaintsika. Ny fankalazana, ny fanaovana haingo ny trano, ny varotra an-trano, ny ora miadana, ny filaharana, ny fitohanan'ny fifamoivoizana ary ny fotoam-pianakaviana dia mety hiteraka hatezerana be sy hahatezitra antsika. Avy eo dia tianao ny hahita fanomezana mety ho an'ny rehetra ao amin'ny lisitra ary hahita indray fa ny fanomezana dia mety ho lafo be.
Na inona na inona atao, ataoko fa misy zavatra azonao omena ny olona hihaona aminao amin'izao vanim-potoana izao ary tsy maninona na amin'inona na amin'inona. A SMILE! Ny tsiky dia fanomezana tonga lafatra ho an'ny olona rehetra amin'ny kolontsaina rehetra, amin'ny fiteny rehetra, hazakazaka rehetra ary sokajy rehetra. Azonao omena azy ny namana, havana, mpiara-miasa sy ny olon-tsy fantatra. Izy io dia mifanentana amin'ny tsirairay ary azo antoka fa mahatonga ny olona ho tanora kokoa sy hahasarika kokoa.
Fanomezana mahasoa izaitsizy ny tsikitsiky. Tsara ho an'izay manome tsiky sy izay mandray azy. Ny fikarohana dia naneho fa ny fihomehy dia afaka manova ny alahelo, mety hampihena ny adin-tsaina ihany koa, manamafy ny hery fiarovana ary hampihena ny tosidra; endorphin, fanamaivanana ny fanaintainana voajanahary ary serotonin dia azo averina ao anaty vatana koa.
Areti-mifindra ny tsiky - amin'ny fomba tsara. Dr. Daniel Goleman, psikolojika ary mpanoratra ny boky Social Intelligence, nanazava fa ny lakile iray hahatakaranao io fisehoan-javatra io dia ao amin'ireo sela nerve izay antsoina hoe neuron-fitaratra. Manana sela fitaratra daholo isika rehetra. Nanoratra i Goleman fa ny hany asany dia ny "manaiky tsiky sy hahatonga antsika hiverina ny tsiky". Mazava ho azy fa mihatra amin'ny tarehy ratsy izany koa. Ka afaka misafidy isika. Tiantsika ve raha ny olona no mijery antsika tezitra na mitsiky antsika? Fantatrao ve fa na ny tsiky kely miharihary aza dia mahafaly anao kokoa?
Afaka mianatra amin’ny zazakely mihitsy aza isika. Ny zaza vao teraka dia aleony endrika mitsiky toy izay endrika tsy miandany. Asehon'ny zazakely amin'ny olon-tiany endrika mitsikitsiky feno fifaliana sy fahasambarana. Raha miresaka momba ny zazakely, ahoana ny amin'ny zazakely izay ahitana izao fotoam-pialan-tsasatra izao? Nanatona ny olona i Jesosy mba hananany antony hitsiky. Talohan'ny nahatongavany dia tsy nisy fanantenana. Fa tamin'ny andro nahaterahany dia nisy fety lehibe. “Ary niaraka tamin’izay dia nisy ny maro be any an-danitra niaraka tamin’ny anjely, izay nidera an’Andriamanitra ka nanao hoe: Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra ary fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany” (Lioka. 2,8- iray).
Krismasy dia fankalazana fifaliana sy tsiky! Afaka manisy haingo, mankalaza, miantsena, mihira ary manokan-fotoana miaraka amin'ny fianakavianao ianao, fa raha tsy mitsiky ianao dia tsy mankalaza. Mitsiky! Azonao atao ny manao izany. Tsy mandratra mihitsy izany! Tsy mandany vola be na vola izany. Fanomezana izay faly ampitaina ary miverina aminao. Tsy azoko an-tsaina fa rehefa mitsiky amin'ny olona hafa i Jesosy dia mitsiky anay koa.
Soso-kevitra momba ny fomba ahafahantsika mampihatra tsara ny fanapahan-kevintsika
Voalohany, mitsikia rehefa mifoha amin'ny maraina ianao, na dia tsy misy mahita izany. Io no mamaritra ny tadin'ilay andro.
Mitsikia ireo olona hihaona aminao mandritra ny andro, na manao ahoana na mitsiky anao izy na tsia. Afaka mamaritra ny tononin'ny andronao izany.
Mitsikera alohan'ny fampiasana ny telefaona. Izy io dia mamaritra ny fitran'ny feonao.
Mitsikia raha mihaino mozika Krismasy ianao ary mieritreritra momba ny fahaterahan'i Kristy. Io no mamaritra ny fofon'aina amin'ny fiainanao ara-panahy.
Mitsiky alohan'ny hatory ary misaora an'Andriamanitra noho ny zavatra kely tratraninao nandritra ny andro. Izy io dia mamaritra ny fihirana ny torimaso tsara kokoa amin'ny alina.